Ahoana ny fanovana fampahalalana momba ny autofill ao amin'ny OS X Safari | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fanovana ny fampahalalana momba ny autofill ao amin'ny OS X Safari
Pedro Rodas | | OS X Yosemite, Tutorials
Iray amin'ireo zavatra mahatonga Safari amin'ny OS X ho somary miavaka, ny fahamoran'ny ahafahanao manangana zavatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba fanovana ny fampahalalana momba ny autofill izay ampiasain'ny Safari izahay raha ny resaka famahana famolavolana efa nofaritan'ny mpampiasa teo aloha. Raha ny, ohatra, ny anarana, anarana, adiresy, nomeraon-telefaona, sns. Safari autofill no miasa ho antsika.
Na izany aza, mety noho ny toe-javatra dia mila manitsy an'io fampahalalana momba ny autofill io ianao satria tamin'ny fotoana iray dia iray izy io ary hafa izao. Misy fomba tena mora hanovana izany vaovao izany. Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity ary hiafaranao handamina tanteraka ity hetsika ity.
Azontsika atao ihany koa ny miresaka momba ny zava-misy fa tamin'ny fahatongavan'ny rahona iCloud, Apple dia nandefa ilay nantsoiny hoe iCloud Keychain, amin'ny alalàn'ny tenimiafina izay voatahiry ao amin'ny fampahalalana momba ny autofill ihany koa no ampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovanay rehetra. Raha fintinina, fitaovana iray miaraka amin'ny fizotran'ny kinova Safari dia nihatsara tsikelikely mandra-pahatongany amin'ny endriny ankehitriny.
Mba hanovana ny fampahalalana momba ny autofill izay ananan'i Safari momba antsika dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Sokafy ny rindrambaiko Safari hitondra ny Bara fisakafoanana ambony an'i Safari.
Izao dia tsindrio ny drop-down Safari ary tsindrio safidinao. Misokatra ny varavarankely miaraka amin'ny safidin'ny fampiharana.
Ao anatin'ny varavarankely dia hitantsika eo amin'ny faritra ambony ny andian-kisary izay mahatonga antsika hifandimby eo amin'ireo kiheba hafa ananan'ny fikandrana. Safidintsika ny kisary izay mitondra antsika mankany amin'ny kiheba Autofill.
Rehefa tafiditra ao anatin'io tabilao io isika dia aseho fizarana efatra izay azo ahodina ary ao amin'izy ireo dia ho hitantsika ny fampahalalana momba ny autofill izay ananan'i Safari, afaka mamafa ireo singa tsirairay na mamafa ny zava-drehetra ao anaty indray mipy.
Satria samy manana ny safidiny voafidy amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty mifanaraka aminy ny tsirairay amin'ireo zana-bola, dia azontsika atao ihany koa ny mamela na manafoana izany amin'ny ho avy Safari manangona vaovao mifandraika amin'ny iray amin'ireo famandrihana ireo indray.
Araka ny efa hitanao, fomba tsotra sy mora hifehezana ny angon-drakitra izay notehirizin'ny Safari tamin'ny fampahalalana anay izany mba hamenoana tena amin'ny tranonkala. Ankehitriny ny azonao atao dia ny mitety ireo subsection ireo ary zahao raha misy fampahalalana izay tsy ampiasainao intsony ary esorina ao anatin'io famenoana autofill io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X Yosemite » Ahoana ny fanovana ny fampahalalana momba ny autofill ao amin'ny OS X Safari
Ahoana ny fomba fampidirana sary ao amin'ny iCloud Photo Library amin'ny solosainao
MiniPlayer for Mac tonga, mpilalao mozika mahafinaritra